Grid bitika rafitra
Ao amin'ny rafi-Grid
Off-Grid rivotra fahefana famatsiana
Off-masoandro sy ny rivotra Grid solika
Telecom toby famatsiana fahefana
Wind-masoandro sy ny Grid mifangaro
Dity miova rivotra turbine dia patented vokatra sy ny mpisava lalana ao amin'ny rivotra turbine orinasa. Ny tena lasa centrifugal dity maso mekanisma-drivotra turbine manitsy vary dity rivotra manaraka Fanodina miodina hafainganam-pandeha, ka tandremo rivotra turbine amin'ny laharana nihodina hafainganam-pandeha. Ny rivotra turbine manana tranon'omby ...
ny mpitantana ny 18-04-21
Ao amin'ny rafitra Grid (na ny Grid fifandraisana rafitra) no malaza indrindra rafitra fampiharana izao. Wind turbines alternating hiteraka herinaratra, ny herinaratra dia miovaova amin'ny malefaka sy matetika miankina amin'ny hafainganam-pandehan'ny rivotra. Ao amin'ny maso Grid niova fo izany amin'izao fotoana izao herinaratra any mivantana sy fomba Vo ...
Wind-masoandro sy ny Grid mifangaro fahefana rafitra famatsian
ny mpitantana ny 18-04-20
Miasa toro lalana: Vent turbine sy ny masoandro tontonana hiteraka herinaratra, ny herinaratra dia voampanga ho any amin'ny vondrona bateria ny mamaly ny maso, ary avy eo amin'ny alalan'ny inverter, ny rafitra famatsiana AC hery ho an'ny entana. Rehefa tsy misy herinaratra ao amin'ny vondrona Mamono, inverter dia mifamadika ny Grid ...
Telecom rafitra famatsian-peo fahefana
ny mpitantana ny 18-04-19
Telecom rafitra famatsian-peo fahefana rivotra kely turbines no vahaolana tonga lafatra ho an'ny sehatry ny fifandraisan-davitra. Telecom stations dia Naparitaka be dia be manerana izao tontolo izao mba hahazoana antoka ny fifandraisana ampy fotodrafitrasa. Amin'ny ankamaroan'ny faritra lavitra, ny hery ireo fepetra takiana ho an'ny toby ny ...
Off-Grid herin'ny masoandro sy ny rivotra solika mifangaro fahefana rafitra famatsian
ny mpitantana ny 18-04-03
Off-Grid rivotra masoandro sy ny solika mifangaro hery famatsian rafi-miasa fitsipiky ny rafitr'ity tontolo ity: Vent turbine sy ny masoandro tontonana hiteraka herinaratra, ny herinaratra dia voampanga ho ao an-bateria vondrona ny mamaly ny maso, ary avy eo amin'ny alalan'ny inverter, ny rafitra famatsiana AC hery ho an'ny entana . Diesel Gen ...
Off-Grid rivotra fahefana rafitra famatsian
Kiritika rafitra Grid Micro Grid rafitra izao bebe kokoa malaza ho milamina hery famatsiana tanjona, ny rafitra dia azo ampiasaina ho an'ny tetikasa mitokana na ny Grid fifandraisana tanjona. Kiritika Grid dia karazana hery vaovao famatsian Network, dia ahitana rafitra rivotra, rafi-masoandro, entana, bateria vondrona (na angovo hafa St ...